आँसुले छातीमा लेख्नेहरुको गीत के गजल के?
अविरल साउन बर्षिरहन्छन् बाढि के भल के?
सुन्दैछु कहिँ बच्चाहरु ताराबाजी लै गाउँदैछन्,
उमेरले निदरी खोसेपछि पापा के काफल के?
भर्खरै उड्यो वायुयान कतै अज्ञात दिशातर्फ,
आकाशमा रहेको मुश्लो धर्सा धुवाँ के बादल के?
बिना बल र बिना बुद्धि लाग्दथ्यो केहि जितिंदैन,
रुँदैछु म आज तर प्रेम जित्न बुद्धि के बल के?
बुद्ध भन्नु केहि चरा थिए बनमा गीत गाउने,
तिनीहरु बसाईं उडेपछि शान्ती के खलल के?
बुझ्दैन कथा छहारीको विमुख छ उ प्रेमबाट,
शिरमा सिँगो आकाश उस्लाई कात्रो के आँचल के?